Nneyɛe—Mfa Nneɛma Nkyekyere Wo Ho
1. Mfa Nneɛma Nkyekyere Wo Ho
Ebia wubenya adwene sɛ, ɛsɛ sɛ woyɛ nsakrae nnɛ ne ɔkyena yi ara. Wobɛhwɛ mpo no, na woahyɛ wo ho bɔ sɛ, ‘nnawɔtwe yi megyae sigaretnom, merenka ntam bio, mɛda ntɛm, mefi ase atenetene m’apɔw mu, medidi yiye na afei deɛ, mɛfrɛ me nana wɔ fon so.’ Nea ɛwom ara ne sɛ, sɛ wode nneɛma pii kyekyere wo ho a, worentumi nyɛ baako mpo nwie!
BIBLE MU ASƐM: “Ahobrɛasefo na nyansa ne wɔn te.”—Mmebusɛm 11:2.
Obi a ɔbrɛ ne ho ase no mfa nneɛma pii nkyekyere ne ho. Onim sɛ ɛnyɛ biribiara na obenya bere ne ahoɔden de ayɛ. Saa ara nso na ɛnyɛ nea obiara pɛ na onya. Enti sɛ anka ɔde dakoro bɛyɛ biribiara no, ɔmpere ne ho na mmom ɔto ne bo ase yɛ no nkakrankakra.
Sɛ wode nneɛma pii kyekyere wo ho a, worentumi nyɛ baako mpo nwie!
Fa ade baako anaa mmienu bi a wopɛ sɛ woyɛ anaa wugyae yɛ si w’ani so. Sɔ nea edidi so yi hwɛ:
Fa pɛn ne krataa na kyerɛw nneɛma a w’ani gye ho paa a wopɛ sɛ woyɛ, ne nneɛma a w’ani nnye ho a wunyae a anka wubegyae nyinaa.
Hyehyɛ ma nea ehia wo paa no nni kan na ɛntoatoa so saa ara.
Yɛ no nkakrankakra—ebia ɔfã biara no, yi ade baako anaa mmienu bi na yere wo ho yɛ ɛno nko ara ho adwuma. Wuwie a, kɔ nea edi hɔ no so.
Sɛ nsakrae no bɛba ntɛmtɛm a gye sɛ wode suban pa bi si nea enye no ananmu. Nea wubetumi ayɛ ni. Yɛmfa no sɛ ebia subammɔne a ɛhaw wo ne sɛ wohwɛ TV dodow; ɛnna suban pa a wopɛ sɛ wunya ne sɛ wobɛtaa asrasra w’adɔfo. Wubetumi ayɛ w’adwene sɛ: ‘Sɛ́ anka mifi adwuma ba ara pɛ a mɛsɔ TV no, mede saa bere no mmom bɛfrɛ me busuani anaa m’adamfo bi ne no abɔ nkɔmmɔ.’
‘Mompɛɛpɛɛ mu nhu nneɛma a ehia koraa no’—Filipifo 1:10.
“Asɛm awiei ye sen ne mfiase.”—Ɔsɛnkafo 7:8.